मेरो मुखमा बिर्य झर्छ, के म गर्भवति हुन्छु ? – Akhabar Dainik
मेरो मुखमा बिर्य झर्छ, के म गर्भवति हुन्छु ?
तपाईंले भन्नुभएको क्रियाकलाप मुखमैथुन हो । एक व्यक्तिको यौनअङ्ग अर्को व्यक्तिको मुखको सम्पर्कमा ल्याई गरिने यौन क्रियाकलापलाई नै मुखमैथुन भनिन्छ । कतिपयले यसलाई पनि एक किसिमको यौनसम्पर्क नै मान्छन् । त्यस अर्थमा तपाईंहरूले योनि–लिङ्ग मैथुनका साथै मुख मैथुन पनि गरेको बुझिन्छ । वास्तवमा मुखमैथुन भन्दा १.लिङ्ग–मुख मैथुन २.योनि–मुख मैथुन ३. गुद्द्वार–मुख मैथुन सबै प्रकारलाई बुझ्नुपर्छ ।
ऋषि वात्सायनले मुखमैथुनलाई विभिन्न आठ नाममा वर्गीकृत गरेका छन् । ती हुन्—निमित्त (हातले लिङ्गलाई समातेर ओठ त्यसमा राखेर मुख गोलो पारेर हल्का किसिमले घर्षण गर्नु), पाश्र्वतोदष्ट (लिङ्गको अघिल्लो भागलाई हातले छोपेर, पछिल्लो भागलाई ओठले दबाउने), बहिसन्देश (लिङ्गको अग्रभागलाई मुखभित्र राखेर अघिपछि गर्ने), अन्तस्सन्देश (बहिसन्देशभन्दा बढी नै मुखभित्र राखेर अघिपछि गर्ने), चुम्बितक (ओठलाई चुम्बलिएजस्तै चुम्बन लिने), परिमुष्टक (जिब्रोले लिङ्गको अग्रभाग चलाउने), आम्रचूसितक (लिङ्गलाई मुखभित्र राखेर आँप चुसेजस्तै चुस्ने), संगर (लिङ्गलाई दाँतले स्खलित नभएसम्म दबाउने) ।
छोटकरीमा भन्नुपर्दा कुनै स्वस्थ व्यक्तिको वीर्य खाँदा अर्थात् वीर्यपान गर्दा कुनै हानि हुँदैन । वीर्यमा कुनै विषालु पदार्थ हुँदैन । रसायनिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने पनि त्यसमा केही सामान्य कार्बोहाइड्रेड, केही प्रोटिनका साथमा मुख्यतस् पानी हुन्छ । यसमा भएका पदार्थ एक विशेष मानवकोष ‘शुक्रकीट’ बाँच्न सकोस् भनेर संरचना गरिएको हुन्छ, यसमा त्यसैले मानवकोषलाई हानि गर्ने किसिमको कुनै पदार्थ हुँदैन ।
कसैकसैमा धारणागत भिन्नताका कारण वीर्य मुखमा परेको मन नपर्न सक्छ । कसैलाई यसको स्वाद वा गन्ध नै मन पर्दैन । त्यसो हुँदा वाकवाकलाग्ने हुन सक्छ, तर तपाईंमा त्यस्तो कुनै कुरा भएको देखिँदैन । तपाईंले खाने कतिपय कुराले वीर्यको स्वादमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्छ । उदाहरणका लागि कफी वा रक्सीको सेवनले त्यसमा तीतोपन बढाउन सक्छ भने भुइँकटहर, आँप, किबी, काँक्रो, पार्सले जस्ता वस्तुले गन्ध राम्रो बनाउँछ ।
तपाईंको संकेत मुखमैथुन गर्दा हुने वीर्यपानले गर्भ रहन्छ कि भन्ने हो भने माथि नै भनिसकियो कि पेटमा भएको अम्ल (एसिड)को सम्पर्कमा आउँदा सुक्रकिट मर्छन् । यसमा मुख्यस् कुरा के हो भने ती शुक्रकिट पेटमा पुगे पनि तल्लो पेट अर्थात् पाठेघरमा पुग्दैनन् । पाठेघर अनि डिम्बवाहिनी नलीमा वीर्यमा भएका शुक्रकीट र्पुयाउन वीर्यलाई योनिमा स्खलित गराउन आवश्यक छ न कि मुखमा । आशा गर्छु, कुरा बुझ्नु नै भयो होला । साप्ताहिकबाट